Waa in la ogaadaa in video iyo sidoo kale duubo shaashadda waa ka shaqeynayaan in la doonayo by users aad u gaarka ah si loo hubiyo in ugu fiican ayaa laga soo saaray fekerka ah iyo user wuxuu sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay oo aan wax arrinta iyo dhib. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah barnaamijyada laga doodi lahaa in tutorial tani waa kuwa la labada bixiyo oo lacag la'aan ah si user ah mid ka mid ah dooran kartaa sida rabitaan iyo baahida loo qabo in la sameeyo iyo sidoo kale hubin karaa in in barnaamijka lagala soo bixi yahay siduu u isticmaalo.
Qeybta 1: Top 5 free Screen Rikoodh Software
Qeybta 2: 5 Top ugu fiican Screen bixisay Rikoodh Software
Qaybtan tutorial waa inuu xaqiijiyo in user helo ugu fiican iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka in ay yihiin lacag la'aan iyo shaqeynayaan waa aan ka yarayn barnaamij kasta bixiyo arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in functionalities ah iyo sidoo kale astaamaha guud ahaan in ay la soo sharxay qaybtan waxaa sidoo kale loo arkaa buuxa si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan oo barnaamijka ku haboon baahidaada ah waxaa soo bixi oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
1. Qaado Tiny
Waa barnaamijka ugu fiican taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo interface fudud iyo functionalities la xiriira in la soo gundhig waa kuwa u fiican inkastoo of isagoo xor ah, kuwaas oo si joogto ah updated si loo hubiyo in user weli waafaqsan hadda shuruudaha adeegsanaya barnaamijka fudayd.
2. S taariikhqorihii
Ayaa dhisay functionalities u fiican iyo user wuxuu hubinayaa in in barnaamijka aan la soo bixi oo kaliya laakiin sidoo kale loo isticmaalaa lacag la'aan laakiin qaababka in lagu gundhig ay gudahood waa kuwa u fiican ayna u oggolaadaan in user si loo hubiyo in Barnaamijka la soo bixi hubaal.
Barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in sida ugu fiican oo gobolka ka shaqeynayaan tahay la soo bixi oo loo isticmaalo wax waqti ah gudahood oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in barnaamijka waxaa fiican loogama isticmaalo iyadoo la kaashanayo hagayaasha iyo ka ii akhrin file txt in la soo bixi leh barnaamijka sameeyo.
Pixel Smart ayaa la soo saaray si gaar ah si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay waxaa gundhig gudahood. User waa in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi website-ka rasmiga ah sida ay version dhawaan ayaa la casriyeeyay iyo in la hubiyo in ugu wanaagsan waxaa laga soo arrin ku saabsan waa in user ugu horeysay tijaabin barnaamijka sameeyo.
Sida barnaamij ayaa la soo saaray iyadoo la isticmaalayo gacmaha ugu fiican ee warshadaha si natiijada yahay oo waafaqsan shuruudaha user iyo dhinaca kale user waa in sidoo kale la hubiyo in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in dhiqlaha haddii wax lagu tilmaansadaa oo lagu yihiin sheegay in la hubiyo in version ugu fiican updated soo saarey.
Ka dib waa 4 sare shaashadda bixiyo barnaamijyada oo keliya baa la soo bixi karaa iyo lagu rakibay mar liisanka ganacsiga in la helo qabsaday.
1. qabashada dhagax Fast
Waa barnaamij taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo haba yaratee kasta oo uu soo qaatay in arrintan la xiriira waa cudur daar si weyn u kordhin. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ka Yeelo iibka ka URL ee kor ku xusan in ay ka fogaadaan wax kasta oo keenta mashaqada.
Taariikhqorihii 2. Wondershare Screen
Waa barnaamijka ugu fiican oo uu soo qoran si aad u hubiso in sida ugu fiican ee la siiyay user iyo in ay sidoo kale sii faraxsan yahay oo uu mabsuud noqdo. Si ka duwan barnaamijyada kale ee la mid ah ku sifayn this mid ka mid ah waa inuu xaqiijiyo in user helo ugu fiican oo arrinta guud ee Qabsashada video iyo duubo shaashadda loo xalin lahaa iyadoo la kaashanayo ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka arrintan la xiriira ka. Si aad u hesho sida ugu fiican ee ka mid ah barnaamijka waxa ay sidoo kale in la xusay in user wuxuu hubinayaa in ay tahay in hago oo uu soo uploaded by ku dhiirigelinayaan in uu at URL kor ku soo sheegnay marka la akhriyo iyo version maxkamad la soo bixi in aan bixiyaan kale oo kasta Barnaamijka ayaa lagu qoran arrintan la xiriira.
Wondershare Video Convertor Ultimate yimaado la video taariikhqorihii iyo barnaamijkan waxaa si toos ah lagu rakibay la software ugu weyn. Wondershare Video Convertor Ultimate waa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka tahay taas oo ka dhigaysa hubiyo in xal video ah waxaa la siiyaa oo dhan ka mid ah oo ka cabsi badan oo gobolka ka mid ah waayo-aragnimo tahay ee la xiriirta video diinta, duuban, gubasho iyo hoorto in TV waxaa la siiyaa . Barnaamijkan ayaa sidoo kale taageertaa 4K iyo HD technology cusub. Reorder video ah wuxuu helaa rakibay barnaamijka ugu muhiimsan sida Wondershare Video convertor kama dambaysta ah sidaa darteed waxaa loo baahan yahay ma ku rakibidda barnaamijka gacanta.
Ay taageerayaan ciidammada xoogga Sony barnaamijkan waa inuu xaqiijiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira iyo sidoo kale helo shaqadii la soo qabtay style iyo fasalka. Barnaamijkan ayaa waxaa si gaar ah loo sameeyey si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo arrin guud waxa laga soo qaatay heerka ku xiga oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican iyo ka hor inta iibsi waxaa lagu talinayaa si loo hubiyo in dib u eegista user ayaa waxaa sidoo kale loo arkaa.
Si ka duwan barnaamijyada kale ee software gelayo la si fiican policyas soo laabto in ka kooban yahay 15 maalmood oo barnaamij lagu soo celin karo haddii user ee aan ku qanacsanayn. Waxaa ugu fiican oo gobolka ka shaqeynayaan tahay in ayaa gundhig iyo user ka heli kartaa ugu fiican haddii tilmaamaha la raacay in la iman barnaamijka ka.
Barnaamijkan ayaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user la wada cafiyo oo ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah diinta qaab farshaxan ah ayaa sidoo kale intaasi dheer oo lagu sameeyey. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa inay hubiyaan in barnaamijka la bartay iyo baaro ka hor waxaa la diiwaan si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyey fasax ma gudahood oo dhan iyo user sidoo kale weli wada cafiyo arrintan la xiriira.
Oo la wareegtay Area kasta oo aad Desktop Screen
> Resource > Record > Top 5 xor ah oo fiican ee Screen Rikoodh Software